Depghara Experidabere na Ahụmahụ Nke Onwe Gị Na-emebi Gị | Martech Zone
Na afọ a IRCE na Chicago, agbawo m ajụjụ ọnụ David Brussin, onye guzobere Monetate, ma ọ bụ mkparịta ụka na-enye nghọta banyere mgbanwe na-agbanwe agbanwe nke ndị na-azụ ahịa na ahụmịhe ha na-atụ anya n'aka ndị na-ere ahịa na ntanetị na apụ. Ikpe maka ịhazi onwe ya na-esikwu ike, ọ nwere ike bụrụ na ọ rutere ebe nkwụsị.
Na-adịbeghị anya Monetate Ecommerce nkeji iri na ise na-egosi na ibiaghachi udu elu, nkezi iji ụkpụrụ na-ala na akakabarede udu-anọgide na-ojuju. Nhazi na ule na-egbochi omume a… ọ bụghị naanị n'ihi ndụmọdụ ndị kachasị mma kama n'ihi na saịtị ndị na-eji teknụzụ ndị a eme ihe na-enweta ma na-edebe ndị ahịa n'ihi ahụmịhe ahịa ka mma.
Nkwupụta Ecommerce ahụ na-enyocha otu ụdị nke ihe karịrị 7 ijeri ahụmịhe ịzụ ahịa n'ịntanetị na-eji otu ụlọ ahịa data n'ofe nkeji kalenda ọ bụla. Averages ofụri akụkọ na-gbakọọ gafee dum sample. Ngosipụta arụmọrụ dị mkpa, dị ka ọnụ ahịa ego na ọnụego ntụgharị, dịgasị site na ụlọ ọrụ na ụdị ahịa. Averages ndị a na-ebipụta naanị iji kwado nyocha ahụ na mwepụta ọ bụla nke akụkọ ahụ, ọ bụghịkwa ịbụ akara aka maka azụmahịa ecommerce ọ bụla.
Monetate ike ịhazi ọtụtụ ụzọ. Ntughari nke Monetate Platform na enye ndi ahia ohere imeputa, nwalee ma tinye onu ogugu nke ihe omuma dijitalụ nke nwere oke mkpa IT ma obu ichota ihe ndi ozo.
Monetate maka Email - Hazie email gị ma jikọta ya na ibe ọdịda nke ahaziri iche.
Monetate maka ahia - Nkwado ngwaahịa onwe onye na baajị.
Monetate maka ngwa ngwa ngwa - Nhazi na nnwale maka ngwa ngwa ekwentị.
Nhazi nke Monetate na Ntuziaka
na Monetate maka Nhazi, ị nwere ike ịmepụta ahụmịhe ndị ahịa ahaziri iche gafee weebụ, email, yana ngwa ngwa. You're nwere ike hazie ahụmịhe ahịa niile site na ịhazi akụ, ọkọlọtọ, akara, ndị dike na ndị ọzọ. Enwere ike ijikọta ihe data sitere na CRM na POS gị yana weebụ, ọnọdụ, omume na data ngwaọrụ iji melite ahụmịhe ndị ahịa na saịtị gị niile.
ROI nke alizationhazi
Site na nsogbu nke ahia na asọmpi na ntanetị na-agbasawanye, nhazi nke onwe abụghị naanị inye nloghachi na itinye ego, ọ na-aghọ ihe dị mkpa.
Na-arụ ọrụ na nso nso a weputara uzo nkwanye ngwaahịa na ebe obibi ya na Monetate. Ọ bụ ezie na nke onwe ya na ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ ahụ were ya n'ihu site na nyocha ntinye. Otu ụdị gosipụtara nkwupụta ngwaahịa na elu nke ibe ahụ mgbe nsụgharị ọzọ gosipụtara ihe ntanetị na ala nke ibe ahụ. N'ihi nke a, ndị otu a mụbara ọrụ ịzụ ahịa ma kpebisie ike itinye ebe kachasị mma maka ịme mgbanwe ọnụego.
Site na ntụgharị ntụgharị nke 7.29 pasent na 9.33 pasent n'otu n'otu, ha abụọ karịrị ọnụ ọgụgụ ntụgharị nke saịtị ahụ nke 1.64 percent.
Tags: david brussinike ọdịnayaemail njikarịchaemail nkeonwengwa igwemonetatenjikarịchakeonweNkwado ngwaahịanjikarịcha saịtịule saịtịezubere iche